Fisoratana anaty lisi-pifidianana: niaiky ny tsy fahavitrihan’ny mpifidy ny Ceni | NewsMada
Fisoratana anaty lisi-pifidianana: niaiky ny tsy fahavitrihan’ny mpifidy ny Ceni
Tokony hampandinika sy hampieritreitra. Hifarana vonjimaika, ny zoma izao, ny fisoratana anarana anaty lisi-pifidianana. Niaiky tanteraka ny eo anivon’ny Ceni fa tsy mbola nisy tahaka izao ny fanavaozana lisi-pifidianana teto amin’ny firenena. « Ambany ny tahan’ny olona nisoratra anaty lisitra satria 0,38% izany… Distrika miisa 28 amin’ny 119 ny tsy nahitana nisoratra anarana anaty lisi-pifidianana », hoy ny eo anivon’ny Ceni, tamin’ny alalan’Andriamanantsoa Philibert, omaly.
Nametraka paikady ny Ceni sy ny sefo fokontany
Namory ireo sefo fokontany eto an-dRenivohitra izy ireo, omaly, ka namaritra ny paikady hanetsehana sy hanentanana ny olona amin’izany lisi-pifidianana izany. « Miankina amin’io ny fizakana ny zo hifidy hanaovana ny fifidianana amin’ny depiote ny 27 mey izao sy ny fifidianana ben’ny Tanàna amin’ny enim-bolana faharoa amin’ity taona ity. Mbola manana fotoana isika hanamarinana na handraisana ny anarana anaty lisi-pifidianana”, hoy ihany izy.
Afaka manao fitarainana na mijery ny diso…
Tsiahivina fa hampidirina anaty ordinatera eny anivon’ny CED distrika ny lisi-pifidianana avy eny anivon’ny fokontany, aorian’io 15 febroary fifaranan’ny fisoratana anarana anaty lisitra io. Mivoaka lisitra an-taratasy izany avy eo ka manana 20 andro ireo rehetra manana olona momba izany ahafahana manao ny fitarainana raha misy ny diso na tsy tafiditra ao ny anarana. Hahitsy izany avy eo. Hifarana sy hivoaka ny volana mey, mialoha ny fifidianana kosa avy eo ny lisi-pifidianana farany.